Waa maxay Warbaahinta Bulshadu? Maxay Tahay Inay Shirkadaha Daryeelaan?
4 Istaraatijiyadood oo Meheraddaadu ay ku fulinayso adoo adeegsanaya Baraha Bulshada
Khamiista, Noofembar 26, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaa jira wada hadal badan oo ku saabsan saameynta ama saameyn la'aanta warbaahinta bulshada ee ganacsiyada B2C iyo B2B. In badan oo ka mid ah ayaa hoos loo dhigay sababtoo ah dhibaatada la xiriirta Analytics, laakiin shaki kuma jiro inay dadku u adeegsanayaan shabakadaha bulshada inay baaraan oo ay ogaadaan adeegyada iyo xalalka. Ha i aaminin? Booqo Facebook hadda oo raadi dadka weydiinaya talooyinka bulshada. Waxaan arkaa iyaga maalin kasta. Xaqiiqdii, Macaamiisha ayaa 71% u badan inay wax iibsadaan iyagoo ku saleynaya gudbinta warbaahinta bulshada.
Iyadoo biseylka warbaahinta bulshada ee ganacsiga dhowrkii sano ee la soo dhaafay, ururo badan oo B2B ah ay ogaanayaan qiimaha dhabta ah ee ay bixin karto. Haddii aad u isticmaashid warbaahinta bulshada si aad uga caawiso iibinta alaabada si toos ah ama aad u isticmaasho hal qayb oo ka mid ah geeddi-socodka jiilkaaga hoggaanka, qaadashada qaab qorsheysan oo si buuxda u dhexgelinaya warbaahinta bulshada istiraatiijiyaddaada guud ee suuq-geynta ayaa ku siin doonta fursadda ugu wanaagsan ee abuurka ganacsi cusub. Stephen Tamlin, Branching Out Europe
Maxay Yihiin 4 Istaraatijiyadaha Warbaahinta Bulshada ee ay tahay in Meheraddaadu fulinayso?
Dhagaysiga - La socoshada warbaahinta bulshada si ay uga jawaabto rajada iyo macaamiisha khadka tooska ah waa qaab aan caadi aheyn oo lagu abuuro xiriir aamin ah iyaga. Maaha inay ku ekaato iyaga oo si toos ah adiga kula hadlaya, sidoo kale. Waa inaad dhageysataa wixii xusid ah ee ku saabsan magacyada shaqaalahaaga, sumadahaaga, iyo magacyada wax soo saarkaaga. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka jawaabto su'aalaha la xiriira iibka, waxay ilaalin doontaa sumcaddaada internetka, waxayna ku abuuri doontaa kalsooni rajadaada iyo macaamiishaada inaad tahay nooca shirkadda aad labadaba daryeesho oo aad dhageysato. 36% suuqleyda ayaa macaamiil ka helay #Twitter
Waxbarashada - 52% milkiilayaasha meheradaha waxay macaamiishooda ka heleen #Facebook halka 43% milkiilayaasha meheradaha ahi ay macaamiishooda ka heleen #LinkedIn. Ku biirista jaaliyadahaas, waxaad dhageysan kartaa hoggaamiyeyaasha warshadaha, macaamiisha mustaqbalka, iyo macaamiishaada gaarka ah waxay ka hadlaan waxa arrimaha muhiimka ahi ka dhex jiraan warshadahaaga. Tani waxay shirkaddaada ka caawin doontaa sameynta istiraatiijiyado muddo-dheer ah oo ay kula tartami karto warshadahaas.
Ka shaqeyn - Haddii aad hadasho oo keliya markii lala hadlayo, ama marka ay jirto fursad iib - waxaad ka maqantahay bixinta warbaahinta bulshada oo isha ku haysa nooca shirkadda aad tahay. Qeexitaanka waxyaabaha iyo wadaagista qodobka xiisaha u leh rajadaada iyo macaamiishaadu waxay kaa caawin doontaa inaad ku abuurto kalsooni iyo maamul iyaga. Caawinta macaamiishaada inay guuleystaan ​​waxay hubin doontaa guushaada, ma ahan oo keliya kooda!
Horumarinta - Kordhinta gaadhidaada, shabakadaada, iyo kor u qaadida wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada waa daruuri iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee isku dheelitiran. Mar walba ma doonaysid inaad naftaada kor u qaaddo, laakiin sidoo kale maahan inaad ka baabi'iso fursadahaas khadka tooska ah. In ka badan 40% dadka wax iibiya ayaa xiray laba ilaa shan heshiis oo ay ugu wacan tahay Baraha Bulshada
Tags: 2015 tirakoobka ganacsiga warbaahinta bulshadaganacsiga bulshadaiibsashada go'aamadagoogle plus loogu talagalay ganacsigagoogle + ganacsisida ay baraha bulshada u caawin karaan ganacsigaagasida baraha bulshada u caawiyaan ganacsigaku xiran ganacsigaiibinta ayaa xirmaysadadka iibiyawarbaahinta bulshada ee ganacsigasaameynta warbaahinta bulshadaiibinta bulshadaiibinta bulshadatwitter ganacsi
Sidee Jeebka Mobilku u Wadaa iibka
1, 2015 at 12: 09 AM
Maqaal yaab leh Douglas! Tilmaamahan aad bixisay waa in lagu dabaqo marka aad ku xayeysiineyso ganacsigaaga internetka. Dhajinta kuma filna. Dhageysiga dhageystayaashaada iyo la shaqeynta iyaga ayaa muhiim ah si aad awood ugu yeelatid inaad ogaato danahooda. Haddii aad ogtahay xiisaha ay leeyihiin, waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato macaamiisha aad bartilmaameedsatay. Inta badan suuqleydu waxay leeyihiin ganacsi guul leh sababtoo ah macaamiisha ay ka heleen warbaahinta bulshada. Waad ku mahadsan tahay qoraalkan xog-ogaalka ah!
17, 2015 at 1: 37 AM
Dhab ahaan wuu fulin doonaa waxyaalahan. Waxaan ula jeedaa, waxaan u isticmaali jiray warbaahinta bulshada qayb ka mid ah ololahayga suuqgeynteyda iyo istaraatiijiyado ku habboon, illaa iyo hadda, wax weyn ayey u qabtay ganacsiga. Laakiin anigu iskama xadido sidaa darteed qoraalkanaga ayaa runtii iga caawin kara wax badan inaan ku fiicnaado istiraatiijiyadda noocan ah.